American Alsatian: Nduzi kachasị na Nkịta-dị ka Nkịta - Dịrị
American Alsatian: Nduzi kachasị na Nkịta-dị ka Nkịta
Na-achọ a nkịta ọhịa yiri nkịta ọhịa ? Chọrọ nnukwu canine dị ka a enyi ? Kwesịrị ị nweta American Alsatian.
Hound ndị a na-adịghị ahụkebe nwere ike ịdị ka nkịta ọhịa, mana ha bụ dị nwayọọ na enyi na enyi ihe ndị e kere eke.
Ha nwekwara akuko mbido nke na-eduga na ọdịdị ha ugbu a, ọnọdụ dị ebube, yana ahụike dị mma.
Kedu ihe ọzọ dị banyere anụ ọhịa a dị omimi? Guo ka ichoputa ihe banyere Alsatian.
Kedu ihe bụ onye America Alsatian?
Kedu ihe American Alsatian dị ka ya?
Onye Onyinye Nnukwu Onwe Onye
Kedu otu esi elekọta American Alsatian gị?
Ndi American Alsatian nwere nsogbu aru ike?
Kedu ka m ga-esi nweta Alsatian America m?
American Alsatian vs. Similardị ụdị ụdị ndị ọzọ yiri ya
Ndi American Alsatian bu nkita kwesiri gi?
American Alsatian (akpọrọ AL-SAY-SHAN) bụ ụdị buru ibu nke mepụtara maka mkpakọrịta.
Ọtụtụ mgbe, nkịta na-adị obere. Ya mere, ọ dị obere maka oke canine dị ka Alsatian iji rụọ ọrụ yiri nke ahụ.
Ebee ka ha si bịa?
Ihe niile malitere na 30 afọ gara aga site na Dire Wolf Project.
Akụkọ Alsatian nke America: The Dire Wolf Project
N'oge mmụba nke mmasị na wolfdogs na 1987, Lois Denny (nke bụ Lois Schwarz ugbu a) chọrọ ka anụ ọhịa wolf na-ele anya na-enweghị anụ ọhịa wolf ebe ọ bụ na ngwakọ ndị ahụ bụ anụ ụlọ siri ike.
Schwarz họpụtara nkịta ọhịa siri ike iji kee nkịta yiri nkịta wolf, yabụ aha ọrụ ahụ. Nke bụ́ eziokwu kwuo nkịta ọhịa bụ akụkọ ihe mere eme ma mara na ọ bụ otu n'ime anụ ọhịa wolf kasị ukwuu. Ha lara n'iyi n'oge Pleistocene Epoch - nke ahụ bụ 11,000 afọ gara aga!
Na 1988, Schwarz mepụtara akpa ala nke mbụ site na ịgwakọta Alaskan Malamute na Onye Ọzụzụ Atụrụ German - na-akpọ aha ụdị ahụ, North American Shepalute . Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, ọ kpebiri ịgbakwunye English Mastiff na Anatolian / Great Pyrenees mix.
Ọ họọrọ nkịta ndị a ka ndị America Alsatian wee nwee:
Alaskan Malamute na German Shepherd’s isi isi, ahụ, akwara, ụkwụ, ọdụ dị mkpụmkpụ, na akparamagwa (adịkarịghị ụja).
Bekee Mastiff’s nnukwu isi na ọkpụkpụ gbara okirikiri.
Anatolian na Great Pyrenees mix si okpokoro isi, muzzle, elu, obere ọdụ, na agba, na temperament (ọgụgụ isi).
Na 2004, a kpọgharịrị ụdị aha ahụ Alsatian Shepalute - Alsatian si na mbụ German Onye Ọzụzụ Atụrụ aha ‘Alsatian Wolfdog’, na Shepherd na Malamute mix.
Afọ isii ka e mesịrị, ebe ọ bụ na a na-etolite nkịta a dị ka ezigbo ọcha, ha kpebiri inye ụdị aha ahụ kwesịrị ekwesị site na ịhapụ Shepalute ma gbanwee ya na American Alsatian.
Isi klọb ndị dị ka American kennel Club (AKC) ka amataghị ìgwè a. Alsatian ka edenyere aha na National American Alsatian Registry.
Ma nkịta a nwere klọb nke aka ya, National American Alsatian Club ( NAAC ), nke na-ahụ maka Dire Wolf Project kemgbe 2004.
Dị ka Schwarz si kwuo, ịgafe ìgwè ọzọ na-enyere aka nwee ezi ahụ ike . Ọ na-agwakọta ihe ma na-ebute nsogbu ahụike na-alaghachi azụ.
Ọ bụ ya mere o ji gafee Alsatian n'ime nkịta ndị ọzọ dịka:
Irish Wolfhound maka okpokoro isi ya, ogologo ya, uwe waya ya, nghọta ya, na ọgụgụ isi ya.
Labrador nweta maka ụkwụ ya, ọdụ ya dị mkpirikpi, agba ya, na ọgụgụ isi ya.
Ahịa maka anya oval, ọdụ dị mkpụmkpụ, na omume enyi.
Akita maka isi ya, ntị ya, ahụ ya, ọdụ ya dị mkpụmkpụ, na girth ya.
Mgbe ịgafe niile ahụ, Alsatian enweghị ụdị nne na nna ya 'na-egosi ụdị ya. Ya mere, gịnị mere ha ji dị iche?
Na-atụle ndị Alsatian na nkịta nkịta ntọala ha
A na-akpọ ụmụ nwanyị ndị a na-eji azụlite ụdị ọhụrụ ka ha nwee nkịta ntọala. Maka Alsatian, ọ bụ Alaskan Malamute na Onye Ọzụzụ Atụrụ German.
Site na ngwakọta Shepalute a, Schwarz chere na ha ka dị ka Onye Ọzụzụ Atụrụ German. O kpebiri ịgafe ọtụtụ ụdị, na-enye anyị American Alsatian anyị nwere taa.
American Alsatian vs. Onye Ọzụzụ Atụrụ German
Onye Ọzụzụ Atụrụ German
Tụnyere ihe Onye Ọzụzụ Atụrụ German , American Alsatian buru ibu ma dịkwa arọ. Ha nwere uwe ogologo nke chọrọ ndozi ọzọ, ma ha nwere ike ịnagide ihu igwe oyi karịa.
Ndị Alsatian dịkwa ahụike ma nwee usoro ndụ dị elu karị. Ha na-achọ obere mmega ahụ ma nwee obere ọrụ. Yabụ ọ bụrụ na ịchọọ nkịta na-arụ ọrụ karị, Ndị Ọzụzụ Atụrụ German ka mma.
Maka nne na nna ọzọ, ndị America Alsatians bụ ibu karịa Alaskan Malamutes . Ha nwere a ogologo uwe nke na-achọkwa ejiji ọzọ, mana Malamutes nwere ike ịnagide ọnọdụ ihu igwe na-adịghị mma.
Alaskan Malamute dị isi ike karịa American Alsatian. Ọbụna ma ọ bụrụ na Alsatian bụ ahụike , ndị Malamute nwere ogologo ndụ.
I nwere ike iche na anụ ọhịa wolf ndị sitere na usoro TV a ma ama Egwuregwu nke ocheeze bụ Alsatian, mana ha abụghị.
Ndị America Alsatians nwere otu ihe ọdịdị na nha nke ahụ na-eme ka ha yie ezigbo nkịta ọhịa.
Canine a nwere mechie, triangular ntị ndị dị n'elu ha obosara ma kpọdaa isi . Ha yiri almọnd anya nwere ike ịbụ obere ma ọ bụ ọkara ma nwee agba n'etiti agba odo na aja aja. Alsasia nwere a nwa imi , ma nke ha ọchịchịrị gbara ọchịchịrị nwere ike mgbe ụfọdụ ude ma ọ bụ na-acha ọcha.
Nnukwu nkịta a nwere nkwonkwo na ogologo aru agwụ na a obosara, ọdụdụ . Alsatian nwere a ọkpụrụkpụ na okpokpụ ọkpụkpụ jikọtara ya na a obosara na obi .
Onye America Alsatian nwere ụdị uwe abụọ, abughi bụ hypoallergenic.
Oke Uwe oyi bụ uwe nwere okpukpu abụọ nke nwere ntutu na-enweghị ntutu ma dị nwayọ na nke dị nro dị nro. Ọ nwere ọkara ogologo, na-enye ntakịrị wooly na canine a.
Na Uwe okpomọkụ dị gịrịgịrị ma dịkwa mkpụmkpụ na-awụpụ mkpuchi mkpuchi niile, na-ahapụ naanị ntutu dị n'èzí.
Nke a hound nwere otutu uwe agba, na ọla ọcha dị ka ihe a na-achọsi ike. Onye America Alsatian na-abatakwa:
Wolf ọla ọcha / sable
Tri sable ọla edo ntụ
Tri ọlaọcha sable
Black ọla ọcha sable
Ude siri ike
Mgbe ị na-enweta nwa nkịta Alsatian nke America, echegbula ma ọ bụrụ na ha egosighi otu n'ime agba ndị a. A mụrụ ha na uwe dị nro dị nro gbara ọchịchịrị nke na-eme ka ude dị nro.
Ha ga-enwe uwe toro eto nke toro eto n’oge ha tụgharịrị 1-afọ .
Kedu ka ndị Alsasia America si buru ibu?
Onye Alsatian bu a nnukwu ma ọ bụ buru ibu nkịta ebe ụmụ nwoke nwere ike itolite 26 ruo 32 sentimita asatọ (66 ruo 81 cm) ogologo ma tụọ n'etiti 90 ka 110 pound (41 ka 50 n'arọ). Ndi nke nwanyi di nso 25 ruo 28 sentimita asatọ (64 ruo 71 cm) n'ogo ma nwee ibu nke 85 ka 105 pound (39 ka 48 n'arọ).
Nwa nkịta America nke Alsatian ruru ogo ha tozuru mgbe ha ruru afọ 3, ha ka nwekwara ike mejupụta ruo afọ 9.
Na oke ha, ha agaghị enwe ntụsara ahụ bi n’obere ụlọ. Ọ kachasị mma maka ụdị a ka ha biri na ụlọ nwere mbara mbara.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ụdị a dị ka anụ ọhịa, ha dị nwayọọ dịka nwa atụrụ. Ọ bụ n'ihi na Schwarz chọrọ ka ndị Alsatian nwee mmụọ maka mkpakọrịta.
Ka anyị lee ka hound a siri dị.
Nwere ihu wolf ma ọ bụ àgwà nwa atụrụ
Ha dị ka ihe dị egwu, mana ha anaghị eme ihe ike ma ọ bụ anụ ọhịa. Ọ dịghị mkpa ịtụ egwu ha ebe ọ bụ na American Alsatian bụ enyi na enyi , ma nkịta a nwekwara ike ịbụ aloof nye ndị bịara abịa. Ha choro mmekorita kwesiri ekwesi imata ndi ha bu enyi ma obu iyi egwu.
Bred ka ọ bụrụ nnukwu onye na-ekwenye ekwenye, ọ bụghị ihe ijuanya na canine a dabara na ezinụlọ. Ndị Alsatians bụ anụ nwere anụ ọkụ nke nwere ike iso ụmụaka na-emekọrịta nke ọma, na-ewepu àgwà obi ụtọ nke ụdị ndị ọzọ. Ha na-ahọrọ ka ha na ndị ha hụrụ n’anya nọrọ ọdụ n’elu ihe ndina ya.
Ha na nkịta na anụ ụlọ ndị ọzọ na-akpakọrịta n'ihi na ha enwela draịvụ dị elu .
Nnukwu hound ma na-agbachi nkịtị dị ka òké
Ọ bụrụ na ịchọrọ nkịta dị jụụ, canine a bụ nhọrọ magburu onwe ya. Onye America Alsatian adịkarịghị mkpọtụ, mkpu ákwá, ma ọ bụ mkpu ákwá . Ihe isi ike - ị gaghị atụkwasị ha obi na nkịta na-eche nche.
Ha abụghị ndị iro ma ọ bụ ndị na-eme ihe ike. Ma oke ha na ihe ndị dị egwu zuru ezu iji mee ka ọtụtụ ihe egwu pụọ.
Ha enweghi ike ibu onye nche, ma ha bu ihe ndi ozo dika ọrụ ma ọ bụ nkịta ọgwụgwọ .
Alsatian bụ ụdị dị jụụ, na-enye ha ohere ịrụ ọrụ dịka nkwegharị agagharị ma ọ bụ nkịta na-achọpụta ihe na-enyere ndị nwere PTSD aka, ịnụ ntị, na autism. Ọ bụrụhaala na ọ bụghị ọrụ siri ike, ha nwere ike ijikwa ya.
Enyi gi nwe ulo
Onye America Alsatian na-eche ịbụ nke mpaghara ma chọọ ịnọ n'ụlọ. E jiri ya tụnyere ụdị anụmanụ ndị ọzọ, poopu a anaghị agagharị ma gbapụ n'ụlọ. Ya mere, n'agbanyeghị nha ha, ị gaghị ahụ canine wolfy gị na-awụli ma ọ bụ na-egwu ala n'okpuru ngere gị.
Ọ bụrụ na ị gaa maka ụdị a, ị ga-enweta nkịta rapara n'ahụ. A maara nkịta a maka okwu ahụ Alsatian 'bonding' , nke pụtara na ọ bụrụ na ndị nwe ha na-efu, ha ga-aga ngwa ngwa ịchọta ha.
Nkịta ndị a na-eguzosi ike n'ihe ga-arapara n'ahụ ndị nna ha ukwu dị ka o kwere mee. Kwadebe onwe gị maka nkịta anụ ọhịa nke nwere paụnd 100 nke na-agaghị ekwe ka nha mee ka ị na-atụgharị ma ọ bụ na-anọdụ na gị.
Zuru okè maka ndị nwe obere ọrụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ nkịta azụ azụ, ụdị a bụ nhọrọ ziri ezi! Ọbụna ma ọ bụrụ na ha dị ka ha nwere ike ịga njem, ha abụghị ndị na-efegharị ịgagharị. Tụnyere ndị ọzọ nnukwu-sized udiri anumanu, ha nwere ala ike etoju - mana ha ka ga-eme mgbatị ahụ.
Ndị American Alsatians ga-emega ahụ ma ọ dịkarịa ala otu awa n'ụbọchị . Ha ga-enwe obi uto igha na agbata obi gi ma obu ihe ichoro n’ubi a n’ihi na ha na gi agha.
Oge kacha mma iji megharịa ahụ ma ọ bụ zụọ Alsatian bụ oge oyi. Ha bụ nọ n'ọrụ n'oge mgbede ruo mgbede na n'isi ụtụtụ.
Ha nwere ike kpo oku mgbe ọ bụ n'ehihie n'ihi uwe elu abụọ ha. Ya mere, mgbe anyanwụ dara, na-atụ anya na ha ga-ehi ụra n'ime ma ọ bụ nọrọ ọdụ n'ebe dị jụụ.
Bredị a bụ nwere ọgụgụ isi , ya mere, ọ ga-adịrị gị mfe ịzụ ha.
Malite na nrube isi ọzụzụ na ndozi ụlọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha ga-ebiri n'ime ụlọ gị. Site na nha ha, ha ga-amụta na nwata ka esi eme omume onwe ha.
Zere ntaramahụhụ mgbe ọ bụla ị na-azụ American Alsatian gị. Debe onwe gi dika onye huru n'anya mkpụrụ , nlezianya ma na-enye ọgwụgwọ na agbamume.
Dị ka nkịta ọ bụla, nhazi na nkwado dị mma ga-enyere ha aka ịmụ ngwa ngwa.
Ga - ahụ na vidiyo a ka esi zụọ ndị Alsatian n'ogige ndị na - agba ịnyịnya:
Mgbe imutachara ihe banyere Alsatian, o ruela ka imata otu esi elebara ha anya.
Ebe ọ bụ na ndị Alsatian bụ nnukwu ìgwè, ha na-arụkwa nnukwu ọrụ, ọkachasị n’oge ịwụfu ha.
Oge Alsatian na-eji ejiji
Mgbe oge ọkọchị bịara, ọ na-abụkarị ọnwa Machị ruo Eprel, ndị Alsatians ga-awụsa ntutu dị n'ime ha na uwe mkpuchi ha.
Ebe ọ bụ na ha nwere uwe elu ha naanị iji chebe ha pụọ ​​n’anyanwụ, ọ kachasị mma idobe kanine gị n’ime ụlọ ma ọ bụ n’okpuru ndò iji gbochie ya ịnwụ.
Na-enweghị mkpuchi, ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ka nkịta gị yie nke gbara ọchịchịrị ma ọ bụ dị gịrịgịrị n’oge a. Alsatian ga-adị nkọ, yabụ nyere ya aka site na ihicha uwe ya na a obosara nchara ígwè mbo . Mee ya otu ugboro n’ụbọchị ma ọ bụ ụbọchị ọ bụla n'oge ịwụfu. Mgbe ihe niile gbasasịrị, a ga-ewepụ ha n'efu.
Nke ahụ pụtakwara na agụụ gị ga-eche ọtụtụ ọrụ ihu ebe ọ bụ na usoro ịwụfu na-ewe ihe dị ka otu ọnwa . Ka ọ na-erule ọnwa Septemba, uwe ime ha ga-amalite itolite.
N'èzí oge ịwụfu ha ma ọ bụ mgbe ha nwere uwe oyi ha, ọ dị mma ịchacha Alsatian gị ma ọ dịkarịa ala otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n’izu . Ha mara mma ntutu isi nwekwara isi-free na-achụpụ unyi, n'ihi ya, ha ga-achọ naanị a saa aru mgbe ọ dị mkpa.
Opekempe otu ugboro n'ọnwa , lelee ntị ha maka unyi ọ bụla ma ọ bụ gburugburu ụwa. Zere ibute ọrịa ma jiri akwa dị ọcha hichaa ha n'oge ọ bụla. Maka mbọ ha, naanị ị ga-achọ ewepụtụ ya otu ugboro n'afọ .
Udia Alsatian fo
Nye American Alsatian gị iko abụọ nke adịchaghị-mma kibble kwa ụbọchị. Nwere ike ịgbakwunye nkịta mgbakwunye ntụ ntụ maka vitamin na mineral.
Gịnị mere n'elu efere ha jiri chiiz, gravy, na shredded iji tinye ekpomeekpo? Oge ụfọdụ, tinye ọkụkọ esiri esi n’ime nri ha. Ha ga-ahụ ya n'anya!
Maka ndị Alsatian na-eto eto, nye ha iko atọ ma ọ bụ anọ nke akọrọ puppy nri kwa ụbọchị. Maka nri mbụ ha, nye ha naanị kibbles. Maka nri ndị a, ị nwekwara ike itinye gravy na anụ agwakọtara, cheese cheese, ma ọ bụ ọkụkọ na osikapa iji rata ha iri nri. Nwere ike ịga n'ihu na nri a ruo mgbe nwa nkịta gị gbanwere afọ 1.
Jide n'aka na ị gaghị enye nkịta gị nri n'efu ebe ọ bụ na ha nwere ike ibuli oke ibu. Kwe ka ha mara oge nri kwesịrị ekwesị, yabụ na canine gị ga-enweta ezigbo ọrụ na nri niile ọ chọrọ.
Ka ọ dị ugbu a, ekwesighi ịgwọ ọrịa. Otu n'ime ihe kachasị mkpa Schwarz na ịmepụta Alsatian bụ ka ọ bụrụ ụdị ahụike dị mma. Ha mere nke a site na ịga n'ihu n'ahịrị na nkịta ndị na-adịghị arịa ọrịa. Mana enwere ụfọdụ nkịta ndị nwere ahụ ike.
Ndị a bụ ọrịa a hụrụ na ụdị a kemgbe ọtụtụ afọ:
Ikiaka na Hip Dysplasia
N'agbanyeghị ihe ndị a niile, ị ga - anọnyere Alsatian America gị ogologo oge ebe ọ bụ na ha nwere ndụ 12 ruo 14 afọ . Ọrụ Dire Wolf ka na-arụ ọrụ iji bulie ahụike ha na ogologo ndụ ha. Ha choro inye otutu umu a ndu dika 15 rue 20, dika ndi wolf. Ọ bụrụ na ha eme nke ọma, nkịta gị nwere ike ịnọnyere gị ruo afọ 6 ọzọ.
’Ve mụtara ihe niile gbasara Alsatian - ugbu a ọ bụ oge iji mara ole na ebe ị ga-enweta otu.
Ebe ọ bụ na ha bụ ìgwè ọhụrụ dị ọhụrụ, canine a na-adịghị ahụkebe agaghị adị ọnụ ala. American Alsatian puppy nwere nkezi price nso nke $ 2,000 ka $ 3,000 .
N'ihe ruru ụmụ nkịta 5 ruo 12, ha ga-enwe ọdịdị dị iche na ọnọdụ ga-emetụta ọnụahịa ha. Dabere na onye na-azụ ya, ọnọdụ ya, na ogo ngwaahịa a na - azụ azụ iji nweta ụdị nkịta, ụfọdụ ndị Alsatians nwere ike iri ihe ruru 10,000 dollar.
Amụma ndị America Alsatian
Iji nyere gị aka ịchọta Alsatian gị, nke a bụ ndepụta nke ndị na-azụ azụ a ma ama nke Schwarz na NAAC kwetara.
Nwa ojii (Oregon)
Nkịta Wolf nke Vallecito (Washington)
Nkịta Wolf ndị Fennario (Colorado)
American Alsatians chọrọ ụlọ
Ebe ọ bụ na ndị Alsatian bụ ụdị ọhụrụ na nke na-adịghị ahụkebe, o siri ike ịchọta ha na ebe a na-edochi ụmụaka ma ọ bụ ebe obibi.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịmụta ma ọ bụ napụta otu, lelee Am. Nnapụta Alsatian , otu ndị nnapụta na-enweghị uru, ma ọ bụrụ na enwere nkịta.
Mgbe ị na-enweta nkịta, ọ dị mkpa ịtụle ma ha ga-adabara n'ezinụlọ gị ma ọ bụ ndụ gị. Ga-enwe ike ime ka ha ejiji na imega ahụ mkpa dị ka nke ọma.
Ya mere, ọ bụrụ na ịmabeghị ma ọ bụrụ na American Alsatian bụ ezigbo enyi gị, lee lee ka ha si atụnyere ụdị anụ ọhịa wolf ndị ọzọ dị elu.
American Alsatian vs. Shiloh Onye Ọzụzụ Atụrụ
Shaịlo Ọzụzụ Atụrụ ( isi mmalite )
American Alsatian bụ pekarịrị karịa Shaịlo Onye Ọzụzụ Atụrụ . Ha bụ na-adịghị arụ ọrụ ga-achọ obere mmega ahụ karịa Shaịlo. Ọ bụrụ na ị nwere anụ ụlọ ndị ọzọ, nweta Alsatian ebe ọ bụ na ndị Shiloh Shepherds abụghị ndị enyi na enyi.
Shaịlo nwere ike ịrụ ụdị ọrụ ndị ọzọ dịka nkịta na-azụ anụ ma ọ bụ na-eche nche. Ha na-agbakwa ụja; yabụ ọ bụrụ na ị chọrọ a nkịta dị jụụ , ọ ka mma ịnweta Alsatian America.
American Alsatian vs. Native American Indian Nkịta
Nwa amaala Indian Indian Dog ma ọ bụ NAID ( isi mmalite )
American Alsatian bụ ibu karịa Nwa nkịta American Indian (NAID), mana ha na-atụ otu ihe.
Ndị Alsatian nwere uwe ogologo oge chọrọ ọzọ ejiji . Ha nwekwara ọzọ uwe agba nhọrọ .
NAID na-ada ụda karịa, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ nkịta dị jụụ, nweta ndị Alsatian. Ndi NAID zuru oke maka ndi nwere ndu ndu ebe ha nwere ike ichu nta na ndi azu.
Nkịta abụọ ahụ bụ ụdị ahụike dị mma, mana NAID nwere nsogbu ahụike ole na ole ma bie ogologo oge karịa ndị Alsatian.
Eze Onye Ọzụzụ Atụrụ ( isi mmalite )
Na Eze Onye Ọzụzụ Atụrụ bụ ngwakọta nke Onye Ọzụzụ Atụrụ German, Shiloh Shepherd, Alaskan Malamute, na Pyrenees Ukwu. N'agbanyeghị na ụdị nne na nna a buru ibu, Alsatian bụ ibu karịa nke a.
Ndị Ọzụzụ Atụrụ Eze kaara arụ ọrụ, karịchaa ọzụzụ atụrụ na nsị. Ha nwekwara ike ịbụ nkịta na-eche nche ebe ọ bụ na ha na-agba ụja oge niile. Ọ bụrụ na ị chọrọ a nkịtị izu , ndị Alsatian bụ nhọrọ ka mma.
Ọ bụrụ na ịchọrọ mgbe niile a nnukwu canine maka otu , American Alsatian bụ ezigbo nwa akwukwo. Ọzọ daashi bụ na ha nwere obere na usoro ọrụ , nke zuru oke maka ndị hụrụ ezumike n'anya n'ụlọ ha.
Bredị a bụ mfe ịzụ , na-eme ha nnukwu nhọrọ maka ndị nwe nkịta mbụ. Ha bụkwa a ahụike dị mma , yabụ na ị gaghị echegbu onwe gị gbasara nleta ndị ahụ na anụmanụ anụmanụ.
Ọ bụrụ na ibi na obere ụlọ, buru n'uche na nkịta a buru oke oke ma ọ ga-ewere ọtụtụ ohere. Alsatians kacha mma maka saa mbara ụlọ dika ndi nwere azu azu ma obu ndi ime obodo.
Onye Alsatian bu a ndozi-elu ahụrụ, yabụ na ị ga-etinyekwu oge na mkpa ha. Ndị a wụsịrị adịghị mma maka ndị nwere allergies, na ndị na-enweghị ike ijikwa ntutu nkịta n'ụlọ ha niile.
Ha nwere ike ịdị ka nkịta ọhịa, mana ha nwere ọyị ma bụrụ ndị enyi. Ga-ahụrịrị ịnwe oke nwayọ a n'ụlọ.
Na-eme atụmatụ ị nweta American Alsatian? Anyị ga-achọ ịnụ maka njem gị. Mee ka anyị mara na ngalaba nkọwa dị n'okpuru.
Ọzụzụ Golden Retriever: Otu esi zụọ ọla edo na izu isii
acha anụnụ anụnụ na ọcha nnukwu dane
beagle ojii na agba aja aja
pomeranian na poodle mix ụmụ nkịta
blue heeler lab mix nwa nkita
ọlaedo retriever na labrador mix